Madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo ka digay Hamiga Maleeshiyadda Alshabaab ee Qaraxyada Nairobi – idalenews.com
Madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo ka digay Hamiga Maleeshiyadda Alshabaab ee Qaraxyada Nairobi
Madaxweynaha ku-xigeenka dalka Kenya William Ruto, oo la hadlay Bahda Saxaafadda Dalkaasi Kenya ayaa waxa uu sheegay in Dowladda Kenya ay go’aan ka qaadatay weerarada kaga imaanaya dhanka Maleeshiyadda Alshabaab ee laga soo ceyriyay inta badan Gobolada Somalia.
William Ruto, waxa uu sheegay inay dul qaateen in mudda ah, wuxuuna Tilmaamay in Dowladda Kenya marnaba aysan u dul qaadan doonin falalka amaandari ee ka dhaca gudaha dalka magaalooyin ka tirsan,isagoona cadeeyay in qalab casri ah la geyn doono goobaha inta badan danbiyada ka dhaca.
William Ruto, oo la hadlaayay Warbaahinta ayaa waxaa ka mid ahaa hadaladiisa “Waxaa Naga go’an ilaalinta Nafta iyo hantida Muwaadin kasta oo Kenyan ah, waa in wax laga qabtaa weerarada ka imaanaya xagjirka Somalia si looga taqluusiyo Rajada ay muujinayaan Kooxdaasi”, sidaa waxaa yiri William Ruto oo ah Madaxweyne ku-xigeenka Kenya.
Ku xigeenka Madaxweynaha dalka ayaa hadalkiisa wuxuu taabanayaa weerararkii ugu danbeeyay ee ka dhacay Magaalada Gaarisa oo dad lagu dilay, wuxuuna ku celcelshay in Dowladiisu aysan raali ka ahaan doonin in la walaaciyo Bulshadda iyo Ajaanibta usoo dal xiistageyso Magaaladda Nairobi.
Haddalka William Ruto, ayaa waxa uu imaanayaa xilli laba maalin ka hor ay Safaaradda Maraykanka Magaaladda Nairobi ka digtay Weeraro kusoo fool leh dowladda Kenya oo kaga imaan doono dhanka Kooxaha xagjirka Somalia ee Alshabaab .
Qarax miino oo Khasaaro ka soo gaartay Ciiddamadda Dowladda ee Gobolka Sh/Dhexe
Cabsi xoogan oo Saakay ka jirto Muqdisho iyo Ciiddamadad AMISOM iyo kuwa Dowladda oo wada Hawlgalo lagu fulinaayo Diyaarado